जनमत पार्टी : गठबन्धन नगर्ने, ११० जनालाई बाँडिसक्यो टिकट - Janaki Post
जनमत पार्टी : गठबन्धन नगर्ने, ११० जनालाई बाँडिसक्यो टिकट
९ वैशाख, जनकपुरधाम । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा थपिएको नयाँ दल हो, जनमत पार्टी ।
स्वतन्त्र मधेशको अभियान छाडेर मुलधारमा आएका डा. सिके राउतले आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको यो पार्टीले पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिन लागेको हो । यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा कोठा बाहिर मतदान गर्ने अभियान चलाएका यो पार्टीले यो पटक आफैं कोठाभित्र मत मागिरहेको छ ।
मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहका साथै प्रदेश नम्बर १, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने तयारी भरहेको जनमत पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।
मधेश प्रदेशमा झण्डै ८० प्रतिशत उम्मेदवार पनि तय भइसकेको पार्टी अध्यक्ष डा. राउत बताउँछन् ।
नयाँ पार्टी, प्रकृया पनि नयाँ
स्थानीय तहको चुनाव भएकाले दलका नेता कार्यकर्ता टिकटका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । आफ्नो दलमा टिकट नपाउने सुइँको पाएपछि कतिपय अर्को दलका पुगेका छन् । सबै जसो दलमा असन्तुष्टि र किचलो बढेको छ ।
तर जनमत पार्टीमा टिकट वितरणको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्था नभएको नेताहरु बताउँछन् ।
एक्लै चुनाव लड्ने
तर जनमत पार्टीले भने कुनै दलसँग पनि गठबन्धन नगर्ने बताउँछन् अध्यक्ष डा. सिके राउत ।
‘तालमेल गर्ने भएको भए टिकट नै वितरण गर्ने थिएनौं,’ अध्यक्ष राउत भन्छन्, ‘हामीले टिकट वितरण गरिसकेका छौं । र, केन्द्रीय समितिले कुनै किसिमको गठबन्धन नै नगर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा हामी किन गठबन्धन गर्ने ?’
अनावश्यक रुपमा आफ्नो दललाई गठबन्धनमा जोड्ने र प्रोपोगन्डा गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
उम्मेदवारी परेको आधा ठाउँमा जित्ने विश्वास
मंसिर २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अन्जनी कुमारी मण्डल र छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को वडाअध्यक्षमा दिनेशकुमार यादवले उम्मेदवारी दिएका थिए । राउत समूहको समर्थनमा लडेका मण्डलले ६०० मत ल्याउँदा यादवले जम्मा ११ मत मात्रै प्राप्त गरे ।
यो पटक भने राम्रो परिणाम ल्याउने जनमतको दाबी छ । उनका अनुसार आफ्नो पार्टी डेढ बर्षदेखि नै चुनावी तयारीमा लागेको भन्दै नेता वीपी साह भन्छन्, ‘यस पटक हामी पूरा तयारीमा छौं । अन्य दलले उम्मेदवार नतोकिसकेको अवस्थामा हाम्रा उम्मेदवार छनौट भई प्रचार–प्रसारमा जुटिसकेका छन ।’
पार्टी अध्यक्ष डा. राउतको दाबी छ, ‘हाम्रो पार्टीप्रति जनताको भरोसा बढ्दै गएको छ । जति ठाउँमा हाम्रो उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, त्यसको आधा ठाउँमा हामी जित्छौं ।’
Previous articleएसईई आजबाट सुरू, ५ लाख १५ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
Next articleबिदा हुन लागेका वडाध्यक्षले कुटे सचिव, टाउकोमा १६ वटा टाँका